भिन्चिको शहर (फोटो कथा) » नेपाल प्लस
ईटालीको उत्तरमा छ मिलान शहर । यो शहर औध्योगिक क्षेत्रका रुपमा चर्चित छ । सभ्य र शालिन मानिसहरु बस्ने भनेर चिनिन्छ । मिलानबाट एक घण्टाको रेल चढेर भिजेभानो भनिने शहर पुगिन्छ । शहर असाध्यै सफा छ । सुन्दर छ । यो शहरलाई विश्व प्रसिद्द कलाकार लिओ नार्दो दा भिन्चिले डिजाईन गरेका रहेछन् । त्यसैले यो शहरको गरिमा र भिन्चिको डिजाइनलाई संरक्ष्ण गरेका छन् यहाँका बासिन्दाले । शहर औधि सफा छ । यो शहरको वरिपरि पुरै क्रिषी क्षेत्र छ । विगतमा यो शहर औध्योगिक रहेछ । कालान्तरमा उध्योग र कल कारखानाहरु बिस्थापित भए । अहिले शहर सुनसान छ । यहाँका धेरै घरका अपार्टमेन्टहरु बिक्रिमा छन् । शहरको मध्य भागकै सटरहरु थुप्रै खालि देखिन्छन् । शहरको आकर्षण ब्यापारिकरुपले घट्दै गएपछि यहाँका मानिसहरुपनि शहरतिर बसाई सर्दै गए । अहिले यो शहर क्रिषीले धानिएको जस्तो लाग्छ । यो धान फल्ने उर्बर भूमी हो । मिलान शहर आउने केहि पर्यटकहरु भिन्चीले कस्तो डिजाईन गर्दा रहेछन् भनेर हेर्न आउने गर्छन् । यो शहरको सबै सडकहरु ढुंगा र तेलिया ईट्टाले कुदिएको छ । भवनहरु पुराना छन् । यो शहरमा विश्व बिध्यालयदेखि सबै संरचना छन् । झट्टा हेर्दा यो शहर सफा, सुन्दरा, सभ्य र शालिन छ ।
प्रकाशित मिति: June 11, 2017
हैना अब हामी भन्दा तपाईं हरुले नै बुझ्नु परनि हो। अहिले नेपालमा जे उन्नति गरे पनि पैसा छ। मंत्री , प्रधानमंत्री हुनै पर्दैन। अब बुझ्नेले कहिले बुझने हो खैई ? ढिलो बुझला रे , त्यो पनि काम भैईन। (१) कुनै पनि काम सानो होईना (२) काम गरेर कोही पनि मर्दैन (३) सहयोग गरेर कोही पनि सानो हुदैन (४) नेपालमा , सबै सबै फलफूलहरु उत्पादन गर्ने पर्छ , चाहिने जति , पुगेको छैना (५) नेपालमा , सबै सबै माछा चाहिन्छ। (५) नेपालमा दूध पुगेको छैना ( ६) नेपालमा मासु पुगेको छैना (७) नेपालमा अण्डा पुगेको छैना , कुखुरा पालन लाज मान्ने होईना। (८) नेपालमा जे गरे पनि पैसा आउछ , जता पनि पैसा छ।
ragat piyer bchne le , ksri bujcha ?
यो के छह भने , अंतरास्ट्रीय अपराधी सीके राउत ले राजनीती लाइ सपोर्ट गर्ने मिल्दैन। सीके राउतले राजनीती लाइ सपोर्ट गर्ने , त्यों राजनितिक पार्टीलाई नै “अंतरास्ट्रीय अपराधी हरुको पार्टी ” बनाउने ? और के झुटो ज्यादा ? ( १) नेपालमे , नेपालको जग्गा चोरेको सीके राउत , गोली खान्छ। यो लेखेर राख्नुस। ( २) रगत पियेर बचने प्रचंडे र बाबूराम अनि अहिलेको राजदूत पुरी , यिनीहरु को कारणले यस्तो भएछ , अंतरास्ट्रीय अपराधिले , राजनीतिमा सपोर्ट गर्ने ? नेपालको बदनाम त गरेयो गरेयो , हमरो बास्तबिक देश भारत को पनि बदनाम गरेको ? हामी मदेशी नेपालको हैना, नागरिकता भएपनि।